Shiinaha warshad kululeeyaha kululeeyaha iyo soosaarayaasha | LYBH
Jirka foornada kulul iyo xakamaynta dhammaan qalabka qalabka dhammaantood waa la naqshadeeyay oo la sameeyay annaga, taas oo hubin karta isku-dubbaridka qaybaha kala duwan isla markaana yareyn kara fashilka ay sababtay isku-dubaridka qayb kasta. Xitaa haddii cilad jirto, waxaa lagu xallin karaa xawaaraha ugu dhaqsaha badan.
Foornada hawada kulul waxay qaadataa nooca isku dhafka tooska ah, oo leh heerka ugu sarreeya ee isticmaalka kuleylka, waxay heli kartaa heerkul sarreeya, soo saar hawo kulul oo deg deg ah, fududahay in la ilaaliyo, waxay hagaajin kartaa waxsoosaarka wax soosaarka iyo keydinta kharashka.
Qaab dhismeedka qiiqa gubanaya ee qaab dhismeedka birta oo dhan xiran, heerkulka naqshadeynta ee 1100 ℃, iyadoo la adeegsanaayo moduleka gaashaan dahaarka dahaarka dusha sare ee aluminium, wuxuu si wax ku ool ah u damaanad qaadi karaa xasilloonida gubashada gaaska iyo heerka gubashada, wuxuu yareyn karaa heerkulka foornada iyo ilaalinta dabku wuxuu dabooli karaa baahiyaha gubashada, kuleylka kuleylka, ilaalinta kuleylka, heerkulka dusha sare ee shooladda hawo kulul ee qiyaastii 60 and, umana baahna foornada iyo dayactirka, xitaa haddii qolka foornada ee joogsiga bilowga-joogga ee foornada ama foornada sidoo kale uma muuqan doonto jabka walxaha diidmada ah, dammaanad qaad shaqada caadiga ah ee qalabka xaaladaha kala duwan.
4. Qaabeynta macquul ah ee marinka marinka iyo godka indho indheynta ee jirka foornada, furfurnaanta furitaanka iyo qaabeynta qaabdhismeedka xirida oo adag, yareeyso ifafaalaha gaaska foornada buux dhaafiyay iyo neefsashada hawo qabow.
5.Af-Qarax aan caddeyn waxaa loogu talagalay jirka foornada si looga fogaado waxyeelo soo gaarta foornada haddii shilal dhacaan oo la kordhiyo nolosha adeegga.
1. Maalmahan, inta badan geedi socodka foornadu waxay u baahan yihiin foornada inay kululaato oo ay qaboojiso had iyo jeer, isbeddelka joogtada ah ee heer kulka wuxuu sababi doonaa uumi bax biyo ku dhaca dabka, hoos u dhaca derbiga qoryaha, degsiimada, dillaac ama xitaa jajabka dahaarka, taasoo keenta waxqabadka kuleylka kuleylka oo liita iyo nolosha gaaban ee foornada.
2. Qaab dhismeedka gidaarada birta ee dabka sameeya wuxuu adkeynayaa hagaajinta foornada. Burburinta iyo gudbinta Firebrick, wareegga dhismaha oo dheer, kharashka dayactirka sare.
3. Module fiber Ceramic oo ah nooc cusub oo ah maaddada dahaarka derbiga ee ilaalinta deegaanka, qalabka fiyuusta dhoobada ayaa aad ugu xasilloon iska caabbinta kuleylka, waxaa loo isticmaali karaa inta u dhexeysa -40 ℃ ~ 1430 ℃, iska caabbinta kuleylka, lakabka dahaarka kuleylka ayaan dillaacin, ha dhicin, ha gubin, iyo asiidh, alkali, saliid iyo xasiloonida kiimikada kale ee aadka u fiican.
4. Astaamaha lagu yaqaan 'modules fiber dhoobada' waxaa inta badan ka muuqda dhinacyada soo socda:
1) Awoodda kuleylka oo hooseysa, kuleylka kuleylka hooseeya.
2) Degganaansho heerkul wanaagsan, xoog siligga iyo xasilloonida kiimikada.
3) Xasiloonida kuleylka wanaagsan iyo caabbinta kuleylka kuleylka.
4) Yaraynta dhawaaqa iyo nuugista codka, dhumucda lebiska, waxaa si toos ah loogu isticmaali karaa kuleylka kuleylka ee foornada, waa fududahay in la rakibo lana isticmaalo.
5. Waqtiyadii hore, modules-kii hore ee caadiga ahaa waxaa inta badan loo isticmaali jiray foornooyinka foornada leh qulqulka qulqulka gaaska hooseeya, sababtoo ah iska caabbinta dabaysha ee qaybaha caadiga ah ee fiyuusku waa kaliya 15-18m / s, heerka socodka qulqulka foornada caadiga ah ee kulul ayaa gaari kara 30-35m / s. Sidaa darteed, modulradii hore ee fiberka looma adeegsan jiray foornooyinka qarxa kululeeyaha.
Xiga: Qalabka Burburka Caaga
Foornada shidaalka kulul-shidaal
Foornada shidaalka ee kululaynta
Foornada Qaraxa kulul ee Horizontal
Kuleeliyaha Hawada Kulul
Foornada Hawada kulul
Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga, Warshad Pyrolysis joogto ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka, Dufcaddii Pyrolysis Plant, Sifee caag ah, Taayirada Pyrolysis,